Gabo Peratra - Famolavolana
Asabotsy 23 Janoary 2021
Peratra Ny peratra Gabo dia natao hampirisihana ny olona hamerina hijery ny lafiny mahafinaritra amin'ny fiainana izay matetika very rehefa tonga ny maha-lehibe. Ny mpamorona dia nahazo aingam-panahy tamin'ny fahatsiarovana ny fahitana ny zanany lahy nilalao tamin'ny kioba majika maro loko. Afaka milalao peratra amin'ny alàlan'ny fihodinana ireo modely mahaleo tena roa ny mpampiasa. Amin'ny fanaovana izany dia ny loko misy ny vatosoa na ny toeran'ny modules mety hifanaraka na mismatched. Ankoatra ny lafiny milalao, ny mpampiasa dia manana safidy amin'ny fanaovana peratra hafa isan'andro.
Anaran'ny tetikasa : Gabo, Anaran'ny mpamorona : Ana Piazza, Anaran'ny mpanjifa : Ana Piazza.
Bridal Veil Ny Chandelier Asabotsy 23 Janoary
Illusion Tranokala Zoma 22 Janoary
Smartstreets-Smartbin™ Sigara / Gum Bin Alakamisy 21 Janoary
Oktobra 2020 (93)
Fanadihadihana famolavolana ny andro Asabotsy 23 Janoary
Tantara momba ny andro Zoma 22 Janoary
Famolavolana ny andro Alakamisy 21 Janoary
Mpamorona ny andro Alarobia 20 Janoary
Ekipa mpamorona ny andro Talata 19 Janoary
Peratra Ana Piazza Gabo